Madasha Badbaadada Qaranka oo waraaq u diratay Midowga Afrika | KEYDMEDIA ONLINE
Madasha Badbaadada Qaranka oo waraaq u diratay Midowga Afrika
Madasha dhawaan lagu aas aasay magaalada Muqdisho, ayaa Badbaadada Qaranka, ayaa waraaq furan u diratay Golaha Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika, waxayna ku baaqeen in si wada jir ah looga hor yimaado muddo kordhinta loo saameeyay ha’adaha Dowladda ee waqtigu ka dhamaaday.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madasha Badbaado Qaran, ayaa qoraal cabasho ah u dirtay Golaha Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika, oo saacadaha soo aaddan yeelanaya shir ku saabsan xaaladaha cakiran ee Soomaaliya.
Madasha Badbaadada Qaranka ‘NSF’ oo ay ku mideysan yihiin qaar kamid ah Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya, Murashaxiinta Madaxweynaha iyo Golaha Siyaasadda Somaliland ee uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka ayaa waraaqdaan marsiiyay safiirka Jabuuti ee Itoobiya Mohamed Idriss Farah, oo ah Guddoomiyaha haatan oo Golaha Amniga iyo Nabadda.
Sida ku cad qoraalka, Madasha Badbaada Qaranka, waxa Gudoomiyaha Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika, ku wargaliyeen sida ay uga walaacsan yihiin arrimaha taagan, waxaana ay soo dhoweyeen dadaallada uu Midowga Africa ku doonayo xal u helidda khilaafka xasaradda isku baddali kara.
Madasha Badbaadada Qaranka, waxa ay ku baqeen in Golaha Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika uu ka hor yimaado, muddo kordhinta, tallaabana laga qaado shaqsiyaadka masuulka ka ah, waxayna xuseen in xalku uu ku jro in dib loogu laabto miiska wadahaddalada.
Waxa ay carrabka ku dhufteen in aysan aqbali doonin, wadaxaajood la xariira muddo kordhin, diyaarna u yihiin ka qeyb galka, wadahadallo lagu dhameys tirayo, heshiiskii 17-kii September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho.
Madashu, waxa ay dalbatay in Soomaaliya laga caawiyo meelaha ay ka liidato, sida Garsoorka oo dib u dhis ku socdo.